Kusetshenziswe umatilasi kanye ne-box entwasahlobo ukuthengiswa ngamanani aphelele | Rayson
Njalo ulwela ukubhekela phambili, iRayyson yathuthuke ukuba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amandla okucwaninga kwesayensi kanye nokuqeda amabhizinisi wenkonzo. Simise uMnyango Wezemisebenzi Amakhasimende ukuthi unikeze kangcono amakhasimende ngezinsizakalo ezisheshayo kufaka phakathi i-Order Tracking Isaziso. Kusetshenziswe umatilasi kanye ne-box entwasahlobo ethengiswayo iRayson ineqembu labasebenzi benkonzo abanesibopho sokuphendula imibuzo ephakanyiswe amakhasimende nge-Intanethi noma ngocingo, ukulandelela isimo seLogistics, kanye nokusiza amakhasimende ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ukuthi ungathanda ukuthola ulwazi oluthe xaxa kulokho, kungani futhi senza kanjani, zama umkhiqizo wethu omusha - wasebenzisa umatilasi kanye ne-Box Sprist ukuthengiswa, noma ungathanda ukuzwa kuwe.People ngeke unuka noma yimuphi iphunga elingathandeki noma iphunga elingathandeki kulo mkhiqizo okokuqala. Ngemuva kokugezwa kaningi, kuba yinamakha ngokwengeziwe.